Ungalilungisa Kanjani Iphutha Lenethiwekhi Ka-2000 kuTwitch? - Ukudlala
Ungalilungisa Kanjani Iphutha Lenethiwekhi Ka-2000 kuTwitch?
I-Twitch kancane kancane yenza isikhundla sayo emhlabeni wokusakazwa bukhoma namavidiyo afunayo. Igcine izigidi zababukeli, izibukeli zansuku zonke. Ngemuva kwalokho, kunensizakalo engaguquguquki nephutha elingajwayelekile ku-Twitch.tv. Ngandlela thile amaphutha angahleliwe angavela njengephutha elithile lenethiwekhi elibekezelela ikhodi yango-2000:Kube nephutha lenethiwekhi. Sicela uzame futhi (iphutha # 2000).
Ngokuqhathanisa namanye amaphutha angenzeka, iphutha 2000 udaba olubanzi kakhulu futhi lungathinta inani elikhulu labasebenzisi.
Eminye Imihlahlandlela Eminye Ye-Twitch:
Ungazihlola Kanjani izingodo zeTwitch Chat?
Lungisa Iphutha Lenethiwekhi Ka-2000 kuTwitch:
1. Vuselela Ukusakaza
Ake sihambe ngesinyathelo esilula kuqala. Lo akuwona umthetho kepha umzamo nje wohlangothi lwakho. Kungenzeka ngokuhluka okuncane ukuthi ukusakazwa kubangele iphutha 2000.
Okufanele ukwenze ukuvuselela kaningi lapho iphutha lihamba khona. Uma kwenzeka, ukuvuselela ngeke kusebenze lapho ungabheka ezinye izinyathelo ezingezansi.
2. Khubaza okwesikhashana i-antivirus yakho yomuntu wesithathu
Njengabanye abasebenzisi, kungenzeka ukuthi usebenzisa ukuvikelwa okususelwa kuwebhu. Imbangela yale nkinga isoftware ethile esezingeni lesithathu.Indlela yabo yokuxazulula iphutha ifana nokumane uvimbele imodyuli kunketho yeklayenti futhi iTwitch izoqala ukuphinde isebenze.
Yize kunesoftware eningi kakhulu ongakhetha kuyo, kuya ngesistimu yakho ukuthi iyiphi i-antivirus efanelekile kakhulu. Awukwazi ukukhomba noma imaphi ama-antiviruses avimba ukusakazwa kwakho uye kumavidiyo futhi uphakamise amaphutha ashiwo ngenhla.
Kodwa-ke, kubalulekile ukugcina ukuvikelwa kusistimu yakho futhi ukhethe ngokufanele. Ngokwesincomo sethu kufanele uye ku-'Bull Guard '. Kuyasiza ukugcina iphutha leTwitch kude futhi kunikezwe.
3. Hlola uxhumano lwakho lwe-inthanethi
Iphutha lango-2000 livela lapho i-inthanethi yakho ingasebenzi kahle njengoba lezi zinhlobo zamaphutha zihlobene ngokuyisisekelo nezinkinga zenethiwekhi.Ukuhlola ukuthi kunenkinga ye-inthanethi noma cha kufanele uhlole isiphequluli. Uma ungakwazi ukuthola inkinga ekuphequluleni i-inthanethi yakho inkinga iqhubeka nezinsizakalo zakho zeTwitch.
Ukuxazulula le nkinga, kufanele uqale kabusha i-WIFI router yakho ngemuva komzuzu noma emibili bese uxhuma kabusha ku-WIFI.Uma inkinga ihlala kumzila we-WIFI ungaxhuma ne-hotspot ephathekayo ukuhlola ukuthi inkinga ilele ku-WIFI yakho noma cha.
4. Iqala kabusha i-PC yakho
Kungenzeka ukuthi ubulizamile vele leli qhinga, kepha uma ungakaqinisekisi ukuqala kabusha i-PC yakho kanye.Ngenkathi wenza lokhu vele ubheke ukuthi ngabe ukulandwa kwewindi lokubuyekeza kuyaqhubeka ngemuva noma okuthile okufana nezifufula, ukulanda amafayela, njll.
Uma kunokulandwa okwenzeka ngemuva kwalokhu lokhu kuzothinta iTwitch yakho njengoba izothenga inethiwekhi kuyo futhi iTwitch ngeke ithole inani elanele lenethiwekhi njengoba kudingeka.Kunconywa ukuthi ume isikhashana ukulanda lapho usebenzisa iTwitch futhi uma unganelisekile ngalesi sinyathelo bese uya esinyathelweni esilandelayo.
5.Vala i-VPN yakho noma i-Proxy
Kulesi sinyathelo wonke umfundi uthola ukwaneliseka.Empeleni lapho uvula i-VPN yakho lokhu kungadala izinkinga eziningi ngenethiwekhi yakho futhi ngokwesibonelo, lokhu kuzokhombisa amaphutha angasebenzi njengephutha 2000.Ukususa izinhlobo ezinjalo zamaphutha vele uye kuphaneli yokulawula ye-VPN bese uyicisha okwesikhashana.
Uma usuvale ukuphuma esipheqululini sakho bese usivula kabusha bese usesha ama-Twitch video streamers obukade uwabuka bese ubona ukuthi isebenza ngaphandle kwe-VPN noma cha.
6. Vala i-Ad Blocker
Le nkohliso nayo ingasebenza. Okufanele ukwenze ukukhipha i-ghostery. Lolu uhlobo lwesikhangiso esivimba ukusakazwa kwamavidiyo weTwitch.Ngaphandle kwe-ghostery, uma unanoma yiluphi uhlobo lwe-Adblocker efana neBlock Origin, Adguard, njll.
Ithiphu Ebalulekile -Kuyadingeka ukufaka okungenani i-Adblocker eyodwa kusistimu yakho. Ukufaka izinhlobo ezahlukahlukene ze-ad-block kusetshenziswa kancane futhi kuzosebenzisa sonke isikhala sakho ohlelweni lwakho.
7. Khubaza noma yiziphi izandiso zesiphequluli
Ukufaka izandiso ze-bowers eziningi akunangqondo. Ngokuyinhloko, awunaso isandiso sesiphequluli esingaphezu kwesisodwa kusistimu yakho. Ngakho-ke, khetha isethi engcono kakhulu yezandiso zesiphequluli sedivayisi yakho.Ukususa zonke izandiso ezingeziwe, kuzofanele ukhethe isandiso ofuna ukusisusa bese uchofoza kwesokudla kulokho kunwetshwa kanye nesandiso sakho sesiphequluli esingafuneki sizosuswa.
8. Jump Ship kuFirefox ukuze uhlole
Enye indlela elula ongazama ukwazi ukuthi ngabe isiphequluli sokusesha yiso esona sikhulu sephutha ngo-2000 noma cha.Kufanele ungene kuFirefox kuphela uma usuyifakile ku-pc yakho noma ungasesha kwiziphequluli ezinjenge-edge, opera bese uhlola ukuthi ukusakazwa kweTwitch kwamavidiyo abukhoma kusebenza kahle noma cha.
Ekugcineni, ake sisonge lo mbhalo ngokuphetha ngokuthi iTwitch empeleni iyinsizakalo yokusakaza ividiyo bukhoma eyethulwe ngabantu baseMelika ngoJuni 2011. Yize le nsizakalo ikude nazo zonke izinhlobo zamaphutha, uma ubhekene nephutha, khona-ke kuzoba yiphutha 2000.
Lokhu kungenzeka ngenxa yezici eziningi njengokuxhuma okuphansi kwe-inthanethi, isoftware yama-antivirus yomuntu wesithathu, izandiso zesiphequluli ezifakwe ngokungadingekile, zisebenzisa i-VPN ngesikhathi sokusakaza iTwitch. Konke lokhu kuyimbangela eyinhloko yephutha elikhuliswa kaningi lapho usebenzisa iTwitch.Kunezindlela ezisheshayo nezilula zokususa izinhlobo ezinjalo zamaphutha nezinkinga zawo ozozithola ku-athikili engenhla.
Q1. Ngililungisa kanjani iphutha lami le-Twitch?
Iminyaka:Ungalungisa leli phutha ngokukhubaza i-antivirus yakho yomuntu wesithathu, ukukhubaza i-VPN yakho okwesikhashana, nokuhlola ukuthi akufanele yini kube khona ukulandwa okwenzeka ngemuva. Lezi ngezinye zezizathu ezithinta ukusebenza kweTwitch kahle.
Q2. Kungani ngilokhu ngithola iphutha lenethiwekhi kuTwitch?
Iminyaka:Lo mbhalo usebenza kuzo zonke izinkinga eziyisisekelo ezingadala amaphutha ahlobene nenethiwekhi kaninginingi nokuthi uwaxazulula kanjani la maphutha.
Q3. Kungani iTwitch imbi?
Iminyaka:I-Twitch ayisihle kangako ukuthi ingasetshenziswa izingane ngenhloso yazo. Ngaphezu kwalokho, iyathandwa ngabantu abadala ngokudlala futhi iyasebenziseka nokwenza abathandekayo bakho babazise ngokuthola ikhadi lesipho leTwitch.
yini amawebhusayithi wama-movie wamahhala
INetflix ikukhokhisa nini
I-xbox one live code generator
ukubukela ibhola kufana ne-inthanethi mahhala
bukela imibukiso ye-tv ku-hd
Ungazithola kanjani izingubo zamahhala ku-roblox ku-ipad